Ny Galaxy Watch Active 2 dia hanana ny asan'ny Apple Watch | Androidsis
Ny Galaxy Watch Active no famantaranandro farany avy amin'ny Samsung dia nanomboka tamin'ny tsena, izay efa nodinihintsika teo aloha. Na dia efa miasa amin'ny taranaka faharoa aza ny orinasa koreana, izay manomboka tsikelikely ny vaovao tonga. Nanomboka tato ho ato dia voalaza fa ity famantaranandro ity dia ho tonga amin'ny habe roa samy hafa raha izany dia. Misy vaovao vaovao izao.
Toa izany Galaxy Watch Active 2 dia mety hanana lafiny sasany itovizany amin'ny Apple Watch. Satria hindrana ny sasany amin'ireo endri-javatra malaza kokoa izay nampidirin'ny Apple Watch farany. Fomba fiasa sasany mety ho tian'ny mpampiasa betsaka.
Misy ny tsaho fa ho avy eo akaikin'ny Galaxy Note 10 ny Galaxy Watch Active, tamin'ny hetsika tamin'ny 7 Aogositra. Tsy misy fanamafisana ofisialy amin'ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Manana izany tsaho izany momba ireo fiasa vaovao hoentin'ny fiambenana amin'ity indray mitoraka ity ihany koa isika.
Ny voalohany dia ny ECG na ny electrocardiogram. Teknolojia izay ahafahantsika mahafantatra ara-pahitana ny asan'ny fo. Manome antsika fanadihadiana voalohany izay mety hahasoa ny dokoteranao sy hamantarana ireo olana aloha. Izy io dia iray amin'ireo fiasa malaza indrindra amin'ny Apple Watch, izay ho hitantsika izao amin'ny famantaranandro Samsung.
Ny fiasa faharoa azontsika antenaina amin'ny Galaxy Watch Active 2 dia ho fahitana lavo. Izy io dia fiasa tena ilaina tokoa, izay mamantatra raha lavo ny mpampiasa ary mampandre ny vonjy taitra raha sendra izany no nitranga. Noho izany dia afaka manampy amin'ny tranga maro izy io. Etsy ankilany, Samsung dia hiasa amin'ny fampidirana bezel mikasika ny famantaranandro.
Manantena izahay fa hahafantatra raha ity Galaxy Watch Active ity havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 7 aogositra, miaraka amin'ny Galaxy Note 10. Raha izany tsy ho ela intsony vao hihaona amin'ny taranaka vaovao amin'ity famantaranandro ity avy amin'ny marika Koreana. Famantaranandro izay mampanantena ny hahatongavany miaraka amin'ny fanovana maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Galaxy Watch Active 2 dia hitovy amin'ny Apple Watch
Nangataka ny fitsarana federaly i Etazonia mba tsy hanenjika azy ireo intsony
Tamin'ny taona 2019, 39.700 miliara dolara no lany tamin'ny fampiharana finday sy lalao